Rabadaan Socotee, Maxaa Kuu Qorshe Ah? Raac Talooyinka Hoos Ku Xusan. WQ: Maxamed Xuseen Jaamac (M.Somali)
Thursday June, 21 2018 - 05:18:47
Thursday June 22, 2017 - 23:24:53 in by Ayaanle Hassan
Waxa aynu ku guda jirnaa lugtii uugu danbaysay ,iyo habeenadii uugu khayrka badnaa ee bisha Rabadaan oo haatan guntii iyo gabagabadii maraaya Ilaahay khayrkooda ha inagu galado kuwii danb dhaaf ka hela ha inaga yeelo.
Rabadaan waa bil ka mid ah nimcooyinka rabi inagu galaday, waa bishii uu soo degay qur'aanka kariimka ahi, waa bisha uu ku jiro habeenka Laylatul qadrigu
oo ah mid ka khayr badan Kun bilood,qofkii ilaahay waafajiyaana waxa uu helaa khayr oo dhan.
Rabadaan waa bishii qur'aan akhriska ,qiyaamu Laylka ,Taraawiixda , safaqada iyo wax la bixista.
Habeenada kooban ee Ramadaan muslimiintu waxa ay ku guda jiraan samaynta acmaal farabadan oo kula xaajoonayaam rabigood.
Bishan barakaysan waxa la xidh xidhaa shayaadiinta ,albaabada Naarta kuwa Janadana waa la furaa,waayo bishii naxariista iyo danbi dhaafka, habeenkasta oo ka tirsan bishan barakaysan waxa naarta laga xoreeyaa kun qof habeen kasta.
Ramadaan waa bishii soonka iyo af xidhnaanta,looma baahna in cunto kaliya laga soomo ,dhamaan waxa laga tagayáa waxii aan munaadib ahayn oo dhan .
Xigmada ku duugan bishani waa in la isku naxariisto kii wax hayaa uu gacan fidiyo walaalkiisa aan waxba hayn ,si bulshada muslimiintu ay isku dareen u noqdaan.
Ramadaan waa bil ka mid ah 12 ka bilood, sanadkiina hal mar bay ina soo martaa , marka ay ku soo marto haddii aad ka faa'idaysato waxa aad tahay mid nasiib badan haddiise ay ku dhaafto oo laguugu danbi dhaafi waayo waxa aad tahay mid ka qaday khayr oo dhan.
Akhrista bishani dhamaatay haddii aad ka qaniimaysatay oo aad ka fara qabsatay iyo haddii ay kugu dhaaftay hurdo iyo cibaado la 'aan.
Maxaa kuu qorshe ah .
Qofka caaqilka ahi waxa loo baahanyahay in uu la yimaad qorshe cad oo uu nafta ku hago bacda Ramadaan,
Naftu waxa ay jeceshahay in ay hawadeeda raacdo ka ilaali yaanay kaa hogaan furan waayo hada waa ay layliday dabar adagna waa uu ku xidhan yahay,ha ka dabcin u sii jiid hogaanka.
TALO KU ANFACAYSA RAMADAAN KA DIB HADDII AAD RAACDO.
1: ku ilaali salaadaha jamaca iyo asaajidka.
2: laasim in aad nafta barto in ay sii joogtayso laylatul qadriga waana aad ka faa'iid doontaa.
3:ka fagow laqwiga ,xanta iyo goobaha fadhi ku dirirka ah.
4: is ku day in aad soonto maalmàha khamiista iyo isniinta
5: la bax sadaqo haddii rabi maal kuu dhiibay.
6:- dadka wanaag kula dhaqan sharqf toodana ha dhaawicin.
7: dadka wanaaga far xumaantana ka reeb.
8: haddii aad balwad lahayd faraha ka qaad dibna ha uugu laaban.
9: akhri wakhtina u samee kitaabka rabi
10: ka ducayso waalidkaa waliba hooyadaa haddii ay nooshahay.
Haddii aad raacdo tobankaa qodob iyo qaar kale oo.aan ka tagay ilaahayna ky waafajiyo joogtaynteeda , wakhti yar gudahii baad ku arki is badal nolaashaada aduun iyo ta aakhiraba.
Fadlan walaal waxa aan kaa codsanayaa ha noqon mid ilaahay caabuda bisha rabadaan oo kaliya ,marka ay baxdana hawadiisa raaca.
Bishan ilaahay khayrkeeda ha ina siiyo ,ha inaga yeelo kuwii laga aqbalo cubaadada,bishaa bisheedana rabi nabad qab ha inagu gaadhsiiyo.
WQ: Maxamed xuseen Jaamac(m.soomaali).
Hargaisa:-Wasiir Ka Tirsan Xukumada Oo Ku Eedeeyaya Dawlada Hoose Boobkulka Danta Guuda
20/06/2018 - 16:21:26
Madaxwaynaha Senegal Oo U Daawashado Tagay Ciyaartii Xuklkiisu Uu Ku Garaacaya Poland
20/06/2018 - 10:21:27
18/06/2018 - 17:21:59
Hargeysa: Daawo Madaxweynaha Somaliland oo Shacabka Caasimadda kula Tukaday Masjidjaamaca Hargeysa
15/06/2018 - 11:03:25
Xog Xasaasiya Ah:-Maxaad Ka Taqaan 12-ka Nin Ee Garab Gucleeya Ilaaladana U Ah Madaxweynaha Kuuriyada Woqooyi.
13/06/2018 - 12:03:42